Broadcom Drivers (Proprietary) ကို Ubuntu 13.04 တွင် Install လုပ်ပါ Linux မှ
Broadcom Drivers (Proprietary) ကို Ubuntu 13.04 တွင်ထည့်ပါ
ခရစ်စတိုဖာကက်စထရို | | GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
အင်တာနက်ရှိပြီး download လုပ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာကိုသွားတယ်။
DKMS ကို Download လုပ်ပါ
Broadcom STA ယာဉ်မောင်း 32 bit ကို Download လုပ်ပါ
Broadcom STA ယာဉ်မောင်း 64 bit ကို Download လုပ်ပါ
ထိုအခါကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျနော်တို့က install လုပ်ချင်တယ်:
DKMS ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီး install လုပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ဗိသုကာပေါ် မူတည်၍ BCMWL ကိုထည့်ပါ။ ဒီအတွက်ငါတို့မှာ GDebi ကို install လုပ်ထားရမယ်၊ မဟုတ်ရင် terminal ကိုဖွင့်ပြီးထည့်လိုက်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Broadcom Drivers (Proprietary) ကို Ubuntu 13.04 တွင်ထည့်ပါ
ဆောင်းပါး၏မူကြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် command line မှရွေးစရာကိုစဉ်းစားပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုသူအသစ်၏အမြင်အရ၎င်းကိုချဉ်းကပ်ရန်ကြိုးစားသောကြောင့်၎င်းကိုပေးပို့လိုက်ခြင်းအတွက်နောင်တရမိသည်။ လေးစားပါတယ်
° <Linux ဆောင်းပါးများ၏ချစ်ခင်ရပါသောအယ်ဒီတာ၊ ဤသင်ခန်းစာအတွက်အင်တာနက်မရှိ၊ တပ်ဆင်မှုအသစ်အနေဖြင့် Gdebi သည်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သာတည်ရှိပြီး Ubuntu Software Center တစ်ခုတည်းသာတပ်ဆင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ Deb ဖိုင်များမှတပ်ဆင်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်။ အကယ်၍ install ခလုတ်ကိုပိတ်ထားပါက File - Install menu ကိုသာနှိပ်ပါ။
Axel Aguilar Rivera နေရာချထားပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Wi-Fi အတွက်ဒရိုင်ဘာများကိုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုမှမတွေ့ရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်လက်ရှိ Ubuntu 13.04 ကိုအသုံးပြုသည်။ ပထမ ဦး ဆုံး UBUNTU STUDIO ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါက၎င်းကိုမွမ်းမံခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ် update လုပ်သောအခါ Wi-Fi သည်ရပ်တန့်သွားပြီးမည်သည့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုမှမတွေ့ရှိပါ။ ယခုသူကငါ့ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ubuntu ကို 13.04 ကို install ငါ့ကိုလွတ်ပေမယ့်ငါနေဆဲပြproblemနာ, HELP
Axel Aguilar Rivera အားပြန်ကြားပါ
Ubuntu 12.04 ကိုသုံးပါ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်သင့်ကိုပိုပြီးမကူညီနိုင်ပေမယ့်အချက်အလက်ပိုလိုအပ်ပါတယ်။
Jorge Zachi Alvez ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောနက်! ကောင်းပြီ၊ ငါဝိုင်ဖိုင်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာနိုးနေပြီ။
Jorge Zachi Alvez အားပြန်ပြောပါ
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - 3
အံ့ fully ဘွယ်သောအဟောင်းကိုသွား !!!!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!!
သင်ထည့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည် drivers များကိုထည့်သွင်းထားသော်လည်းမည်သည့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုမှမတွေ့ရှိပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ဂျော်ကီရှာဖွေပါ။
ထိုအရပ်မှ Controller ကိုသက်ဝင်။
Ubuntu တွင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များတွင် Jockey ကိုရှာပါ။ dash ထဲမှာ။
ကျွန်ုပ်တွင်ဂျော်ကီတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်မလိုအပ်ပါ။ အလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်၊ ကွန်ယက်များစွာကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်။
ဂရိတ်, ယခုကအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ် .. ရွှင်လန်း
ဟယ်လို! ငါကြိုးစားခဲ့သည် edubuntu 13.04 တွင်ကြိုးစားခဲ့သည်နှင့်ငါဘာမှအထီးကျန်မဟုတ်, edubuntu သည် wired network ကိုလည်းမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။
fredy uscategui ဟုသူကပြောသည်
မင်းပြောတာကိုငါလုပ်တယ်၊ အဲဒါကို restart လုပ်ဖို့တောင်းတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ် !!!
fredy uscategui အားပြန်ကြားပါ
ဗိသုကာပညာတွင်ကျွန်ုပ်ဘာရေးသင့်သနည်း။ ကျွန်ုပ် linux အတွက်အသစ်ဖြစ်နေပြီးအလုပ်လုပ်ရန်ဝိုင်ဖိုင်လိုအပ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၎င်းသည် 64-bits (amd386) သို့မဟုတ် 64-bit (i64) ဟုတ်မဟုတ်ပေါ် မူတည်၍ amd32 သို့မဟုတ် i386
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !! ငါ့ဘဝ ရှည်လျားပြီးငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပြီးအသုံးမကျသောသင်ခန်းစာများစွာကိုကြိုးစားပြီးနောက် ၅ မိနစ်အတွင်းဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်ရန်မလိုပါ၊ ကွန်ယက်ပေါ်လာပြီးဖြစ်သည်။ ထပ်တလဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Parceeee အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ် !!!
ပြီးပြည့်စုံသော funko! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ubuntu 12.04 တွင်ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက် (သို့) ဝိုင်ဖိုင် (သို့) ကေဘယ်လ်ကိုမဆက်သွယ်နိုင်ပါ။
ဒီဖိုင်နှစ်ခုကို download လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ကျွန်ုပ် FATAL module ကိုမတွေ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟိုဆေး Algrienzo ဟုသူကပြောသည်
Fuckin '' ဦး လေး
Jose Algrienzo အားပြန်ပြောပါ
Windowser ကို Linux သို့ပြောင်းလဲခြင်း - မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
Ubuntu 13.10 ကို Saucy Salamander လို့ခေါ်တယ်